Talaabada Koowaad ee Ganacsiga Bulshada: daahfurka | Martech Zone
Isniin, November 26, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Marty Thompson
Waxaan dhowaan dhammeeyey akhriska (markii labaad) buugga weyn, Ganacsiga Bulshada Naqshadeynta: Istaraatiijiyadaha Warbaahinta Bulshada ee Is-beddelka ee Shirkadda Kuxiran, by Dion Hinchcliffe iyo Peter Kim.
Su’aasha aan inta badan maqlo ayaa ah “Halkee ayaan ka bilaabaynaa?” Jawaabta oo gaagaaban ayaa ah inaad bilow bilowga, laakiin sida aan u qeexno bilowgu malaha waa talaabada ugu halista badan.
Sidee urur u socdaa dhexgalka iskaashiga bulshada iyo ganacsiga bulshada fikradaha dhammaan meelaha ay ka shaqeeyaan? Ma inay noqotaa dadaal dhan ama aan waxba ahayn, mise waa inay dhexdhexaadisaa istiraatiijiyad ganacsi oo la oggol yahay? A dadaalka daahfurka caadiga ah waxaa ka mid ah fahamka iyo diiwaangelinta dhammaan hababka, dhacdooyinka, Iyo kicin khuseeya howlaha ka socda ururka. Tusaale ahaan, maxay yihiin taxanaha taxaddarrada leh ee dhacdooyinka loo baahan yahay si loo abuuro loona fuliyo amarka iibsiga? Qaansheegta? Cabashada macaamiisha ee asal ahaan ka timid Twitter? Soo celinta alaabta?
Ururo badan ayaa u dhaqaaqi doona hindisaha ganacsiga bulshada iyagoo leh fikradda ah in habraacyada lala dejiyo howlaha bulshada hore iyo dhexe. Waxayna noqoneysaa mid aad u jilicsan in si dhab ah loo sawiro geedi socodka ka soo baxa tan cusub lagama maarmaan u ah bulshada. Markii lagu cadaadiyo inay si buuxda u qeexaan dhammaan howlaha jira, ururo badan si fudud gacanta uguma hayaan. Tanina waxay ku dari kartaa dareenka degdegga ah, in laga tago sababaha.
Laakiin mid kale, iyo ra'yigeyga, habka ugu wanaagsan ayaa ah in marka hore la garto si buuxda dhammaan howlaha jira socodka, ku tiirsanaanta, ilaha, iwm. Mid ka mid ah sababaha sidaa loo sameynayo ayaa ah in waxyaabaha ka reeban badankood aan khariidad la soo saarin, oo ay u muuqato in si xun loo fahmayo. Dadku badanaa kama fekeraan dhismaha qaab dhismeedyada nashaadaadkan, waxayna badanaa u muuqdaan kuwo firfircoon oo firfircoon.
Nooca noocan ah jimicsiga hore wuxuu matali karaa maalgashi aad u fara badan oo lagu sameeyo ilaha. Xitaa barnaamijka ballaaran ee ganacsiga, sida SAP, Oracle, iyo kuwa kale, waxay matali kartaa markii ugu horreysay ee geeddi-socodka ganacsiga iyo ku-tiirsanaanta si macno leh loogu sawiro qaab ay dad badani fahmi karaan. Laakiin si bilow hindisaha ganacsiga bulshada la'aanteed dadaalkan hordhaca ah sidoo kale waxay ka dhigeysaa mid aad u dhib badan in la garto waxyaalaha la isticmaali karo loona isticmaali karo abuurista cabbiraadaha loo isticmaalo in lagu cabbiro hagaajinta nidaamka. Tanina waa muhiim, xitaa haddii aad hadda ka fikireyso inaad isticmaasho (ama aad dhab ka ahaato) Twitter ama Facebook oo qayb ka ah repertoire-ka adeegga macaamiishaada. Tallaabooyinka ilmaha.
Sababta kale ee si buuxda loogu fahmayo socodka socda iyo waxqabadyada jira ayaa ah in layliga laftiisu badanaa awoodo cadee meelaha ay ka jiraan isku soo dhaweynta waxyaalaha ka reeban, meelaha kulkulul hadaad doonto. Fikradda goobaha kululi waxay sidoo kale noqon kartaa tilmaan muujineysa in god biyood jiro, halkaas oo dadka ka soo jeeda kooxaha kaladuwan ay ku kulmaan si aan rasmi ahayn (ama xitaa ku dhowaadba) si ay isu dhaafsadaan macluumaadka. Badanaa, kuwani kuma qeexna socodka socodka jira.
Habka noocan ahi wuxuu si fiican u qaabeeyaa inta badan waxqabadyada bulsheed ee ay tahay inuu u noqdo mid lagu daro howlaha socda. Macnaheedu maaha in urur ka maqan yahay calaamadda wadashaqayn dheeraad ah, udub dhexaad u ah macaamiisha, iwm. xalliyaan dhibaatooyinka ganacsi ee gaarka ah.
Fiiro gaar ah: Taasi waa isku xirnaan ku xiran buugga!
Tags: dion hinchcliffedaahfurkaPeter kimGanacsiga Bulshadaganacsiga bulshada qaab naqshadeysanistiraatiijiyadda warbaahinta bulshadaistaraatiijiyada bulshada
Ahmiyada Wargeys Guji
Nov 27, 2012 at 9: 49 AM
Jacaylka boostada, Marty. Bar barta.
4, 2012 at 11: 11 AM
Amaan sare, runtii, oo ka imaaneysa sayid. Mahadsanid weyn, Chris.
Nov 29, 2012 saacadu markay tahay 11:51 PM
Sawir qaali ah!
Dulmar guud, waxay ii tilmaamtay wax aanan garanayn
ka hor. Waa inaan ku dhiirrigeliyaa shaqadaada cajiibka ah. Waxaan rajeynayaa isla sida ugu fiican
mustaqbalka ka shaqeyso adiga Waad ku mahadsantahay inaad nala wadaagto macluumaadkan.